कपाल फुल्यो भन्दैमा कहाँ बुढो भएँ र ? दिनको ७ भारी घाँस काट्छु ! पत्याउनुहुन्छ ?
उषा तामाङ ।
पौष १, दोलखा
बिहानको ४ बजे उठ्ने गाईवस्तुका लागि कुँडो पकाउने, ५ बजे भित्र भकारो सोहोर्ने, साढे ६ बजेसम्म दूध दुहिसक्नु दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ हावाका गंगाप्रसाद शर्माको दैनिकी हो ।
प्रत्येक दिन जसो गरिने यो कर्मले उहाँलाई आनन्द तुल्याउँछ । कालो कपाल भेटाउन गाह्रै पर्छ, तर उहाँको हिम्मत, जोश र जाँगर कुनै युवाको भन्दा कम छैन् । त्यसैले त उहाँले ४ वटा दुहुना गाई, २ वटा दुहुना भैँसी, एक हल गोरु, सात–आठ वटा बाख्रासमेत पाल्नुभएको छ ।
केही वर्षअघि ५० भन्दा बढी बाख्रा उहाँले पाल्नुभएको थियो । प्रत्येक दिन हुने खर्च टार्न बाख्रा पालनबाट नसकिने भएपछि आम्दानीका लागि एक डेढ वर्ष नै कुर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि दूध बेचेर दैनिक आम्दानी गर्ने सोच उहाँलाई आएको हो ।
जिल्लास्थित मर्सीकोर नेपाल र ग्रामीण उद्यम विकास केन्द्रले सहकारी मार्फत एउटा गाई किनिदिने भएपछि उहाँको त्यो सोच, सोचमा मात्रै सिमित भएन् । संस्थाले एउटा गाई किन्न १५ हजार रुपैयाँ दिएकोमा उहाँले ऋण खोजेरै २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेर काठमाडौंबाट ५ वटा गाई किनेर ल्याउनुभयो । तर विडम्बना एउटा गाई गोठमा पु¥याउन नपाउँदै र्मयो । गाई मरे पनि उहाँले हिम्मत हार्नुभएन् ।
ऋण खोजेर सुरु गरेको व्यवसाय सफल होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले नसताएको भने होइन, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आँट्न त आँटीहालेपछि विजोग हुने हो की भन्ने चिन्ता त खुब लागेको थियो । तर त्यसो भएन । मैले सुरु गरेको काममा म खुशी छु ।’ वर्षा याममा त उहाँले दूध बेचेरै मासिक ३६ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नुभयो । आम्दानी अहिले पनि भइरहेको छ । दुध बेचेरै उहाँले मनग्य आम्दानी गरिरहनुभएको छ ।
२०१४ सालमा जन्मनुभएका शर्माले भन्नुभयो, ‘कपाल फुल्यो भन्दैमा म कहाँ बुढो भएँ र ? दिनको ७ भारी घाँस त अहिले पनि काट्छु, पत्याउनुहुन्छ ?’ शर्मासहित गाउँका केही किसानले उत्पादन गरेको दूध च्यामास्थित संकलन केन्द्रबाट सदरमुकाम चरिकोटको दूग्ध डेरीमा पठाउने गरिएको छ । शर्माले भने उत्पादन भएका दूधमध्ये आधा डेरी र बाँकी रहेको दूध गाउँमै सञ्चालित होटलमा बेच्नुहुन्छ । ३ लाख ७० हजारको लगानीमा उहाँले गोठ नै निर्माण गर्नुभएको छ । गोठमा अझै सुधार गर्न बाँकी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गाईवस्तुका छेउमै जान नहुने जस्तो प्रवृत्ति देखाएर युवा विदेशिएको उहाँलाई मन पर्दैन । ‘आजकालका युवा स्वदेशमा केही छैन भन्दै विदेशिन्छन्, म बुढो भने स्वदेशमै सम्भव छ भनेर देखाउनकै लागि दिनरात खटिरहेको छु । जुन पेशा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैमा लागिरहनुस । सफल भइन्छ ।’
स्वदेशमै गरेर देखाउँछु भन्नेहरुका लागि राज्यले उचित संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न भने नसकेको शर्माको बुझाई छ । ‘जनता धनी भए देश धनी हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो राज्यले बुझ्न सकेन । तर, पनि हामी जस्ता नेपाली देशलाई धनी बनाउन लागिरहने छौँ’, उहाँले थप्नुभयो ।
४ वर्षिया सुमित सुवेदिका अभिभावक बने भिमेश्वर नगरप्रमुख केसी
भुकम्प पछि सञ्चालनमा रहेको उत्थानशिल आवास कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँ वर्ष मनाएर फर्कने क्रममा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको ज्यान गयो
गौरीशंकर बाल गृहका बालबालिकालाई दैनिक उपभोग्य सामाग्री वितरण
बोचमा सञ्चालित खुल्ला पुरुष फुटबल प्रतियोगीताको उपाधि चरिकोट ब्वाईज युवा क्लबलाई
ग्याबा तामाङ उत्थान संघको प्रथम सम्मेलन चोथाङ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न
दोलखामा चरिकोट सडक महोत्सव सुरु
दोलखामा बैङ्कमा सोझै भुक्तानी प्रणाली सुरु
वन लगानी कार्यक्रमबारे छलफल सम्पन्न
फोटो प्रतियोगितामा विजयीलाई पुरस्कार वितरण
भक्ती संगीत Time: 05:00 NST
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम निर्धारित समयमै सक्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन